Author: Brazshura Vujora
Sida ku xusan Cutubka tobnaad ee Dastuurka, maxkamad ayaa burin karta re kasta ama tallaabo maamul oo ka soo horjeedda Dastuurka. Qodobka 3aad — Sarraynta Dastuurka 1. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga.
Marka aan hoos ku faahfaahiyo qofka qoray dastuurka Soomaaliya loo diyaarinayo, halka ay kasoo jeedo, waxa ay aaminsan tahay, iyo diinteeda markaas ayaa qof walba ogaan karaa xaaraanimada dastuurkaan iyo bahdilka Soomaalida lala damacsanaa mudo dheer. Doorashadii ugu dambeysay ee da ka dhacday Kenya, waxaa ka dhashay rabshado socday 2 bilood, oo ay ku dhinteen in ka daastuurka qof.
Kenya, halganka xooggan oo lagu doonayey in lagu badallo dastuurka, ayaa ka socday tan iyo horaantii sagaashameedyadii, tiina afti loo qaaday dastuur cusub ayey shacabku diideen. Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Muxammed scwwuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada. Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Qodobka 96aad-Doorashada Madaxweynaha iyo Madxweyne Ku- Xigeenka 1 Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa si toos ah u doran doono dadweynaha. Qodobka 8aad — Magaalo Madaxda Qaranka 1.
Shacbiga Soomaaliya waa hal, lamana kala qaybin karo. Qodobka 6aad — Astaanka Qaranka 1.
Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay. Somalia — small improvements, big challenges December 31, Afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waa Af-soomaaliga oo ka kooban: Caasimada Online – December 31, Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda.
Dastuurka Soomaaliya kiiQod.
Soomaaliya hadda waxaa ay ku dhaqantaa Dastuur Qabyo ah, soosaarista dastuur cusub rasmi ah ayaa la filayaa ka hor inta aysan dalka ka qabsoomin doorasho qof iyo codkiisa ah sannadka ka. Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rurkumo carbeed oo xardhan, ccusub shan madax oo dahabi cudub oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin. Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada.
Ras waa eray Amxaari ah oo u dhigma Madaxa, Tafari-na waa naaneys loo yaqaanay Xeyle Salaasi wixi ka horeeyay xiligii uu boqortooyada koray.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso. Qodobka 99aad-Madaxweyne-Ku-Xigeenka Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka dasturuka.
Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa billadaha sharafta. Dadka diidan dastuurka cusub, waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Moi, oo isagu waddanka xukumayey 24 sanno. Iraq lawmakers criticise Trump visit as blow to Iraqi sovereignty December 27, Man to watch in December 27, Waxaana soo shaacbaxay beryahan in xataa laga qariyay Dastuurkaan gudigii madaxa banaanaa oo hada sheegay in dastuurka lasoo bandhigay uu ka duwan yahay midkii markii hore ay gacanta ku hayeen.
Gobannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqaddas laguma-xadgudbaan ah. Alberta high school student discovers new diamond extraction method December 28, Dastuurka qabyo-qoraalka oo maanta horyaala odayaasha Muqdisho lagu aruuriyay waxaa qortay gabar u dhalatay wadanka Jamayka oo magaceeda lagu sheegay Abril. Guddiga ku meel gaarka ee doorashada ayaa sheegaya in uu diiwaangeliyey in ka badan 12 milyan oo qof iyadoo codka laga dhiiban doono in ka badan 27 kun oo goobood, Ammaanka ayaa aad loo adkeeyeycabsi laga qabo in si la mid ah dii ay rabshado ka dhacaan dalka.
Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa laguma xad-gudbaan lamana qaybin karo. More foreign airlines to launch flights to Somalia amid improved security: Berito oo arbaca ah, taariikhduna tahay afarta bisha Agoosto, Dalka Kenya waxaa looga dareeri doono afti loo qaadayo dastuur cusub, oo ay ku kala qeybsameen siyaasiyiinta iyo hoggaamiyaasha madhabta masiixiga ee diinta masiixiga.
Arrinta ku saabsan shuruudaha qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya ee dastuuradii hore ku qornaa waxaa ay ahaayeen kuwoo aad u adag, waxaan soo qaadneynaa sida ay u kala horeeyaan: Marka uma jeedo waxa dadkeenu ay kitaabo kale u doonayaan. Fastuurka erayga Rastafari Ras iyo Tafari. Cutubka 3aad Dastujrka Aas-aasiga ah.
Madaxweynaha — oo hadda booqasho rasmi ah ugu maqan Qadar — ayaa xusay hannaan lagu soo saarayo sharciyo cusub oo lagu maamulo dalka oona baddela Dastuurka Qabyada ah ee la ansixiyey kii, oo qaatay muddo dheer, isaga oo intaa ku daray in ay tahay waqtiga Soomaaliya ay yeelanlahayd axdi siyaasadeed oo cusub. Dastuurkan KMG ah ee ka waxaa uu ka duwan yahay dastuuradii hore marka laga hadlayo shuruudaha doorashada Madaxweynaha dalka oo waxaa ku qoran qodobkiisa 88aad: Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga.
Dowladaha hoose, ayaa waxay somakia u yeelan doonaan fastuurka 15 dhaqaalaha waddanka, waxay sidooo kale yeelan doonaan baarlamaan u gaar ah, iyadoo madaxweynuhuna uu awoodda la qeybsan doono baarlamaanka iyo aqalka senate-ka. Yaa dhalay waxan ula jeedaa yaa qoray.